५३ वर्षीया मीना आफ्ना छोरासंग एसइई दिँदै ! « News of Nepal
५३ वर्षीया मीना आफ्ना छोरासंग एसइई दिँदै !
भक्तपुर दुवाकोटकी ५३ वर्षीया मीना आलेमगर आइतबारदेखि शुरु हुने माध्यामिक शिक्षा परीक्षा अर्थात एसइईको तयारीमा व्यस्त हुनुहुन्छ । यस वर्षको एसइईमा सहभागी हुने भएपछि घरधन्दाका अतिरिक्त उहाँलाई पढाइको चटारो थपिएको छ ।
बैंकमा खाता खोल्न जादा कर्मचारीले अहिलेको युगमा पनि हस्ताक्षर गर्न आउँदैन भनेर प्रश्न गरे । त्यसले उहाँको मनमा चस्स घोच्यो । पढ्ने स्कुल खोज्ने क्रममा भक्तपुरको गठ्ठाघरस्थित उक्त विद्यालयमा आएर पढ्न शुरु गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आइतबारदेखि परीक्षा शुरु हुँदैछ, पढाइको चटारो छ, जसरी पनि परीक्षामा राम्रो नतिजा ल्याएर कक्षा १२ सम्म पढ्ने धोको छ ।” पढ्नलाई उमेरले छेक्दैन भन्ने उखान चरितार्थ गर्दै एसइईमा आस्था विद्यालयबाट १७ वर्षकी किशोरीदेखि ५३ वर्षकी आमाहरुसँगै सहभागी हुनुहुनेछ ।
यहाँबाट उत्तीर्ण भएर गएका महिलाले उच्च शिक्षा अध्ययनदेखि शिक्षण, भेटेनरी लगायतका विभिन्न पेशामा रोजगारीसमेत पाएर नयाँ जीवन पाएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।